Toogasho ka dhacday gudaha dalka Mareykanka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Toogasho ka dhacday gudaha dalka Mareykanka
Stephen Scalise oo ka tirsan aqalka wakiilada Mareykanka ayaa goordhow lagu toogtay magaalada Alexandria ee gobolka Virginia, oo dhinaca koonfureed waxyar ka xigta magaalada Washington DC, sida ay sheegeen saraakiisha gurmadka deg degga ah.
Scalise ayaa waxaa laga toogtay sinta, xilli isaga iyo xubno kale oo ka tirsan sharci dejinta Mareykanka ay isku diyaarinayeen cayaar baseball oo sanadle ah oo la qorsheeyey inay khamiista dhacdo. Waxaa la sheegay in xaaladdiisu tahay mid degan.
Wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan shan qof oo kale la dhaawacay. Dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ka mid ah kaaliyaha Scalise iyo xubno ka shaqeeya xarunta congress-ka ee Capitol Hill.
Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in ninka weerarka gaystay uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaareen rasaas ay booliiska ku fureen.
“Waxaan aad uga walaacsanahay musiibadan. Waxaa qalbiyadeena iyo ducadeenu la jirtaa xubnaha congress-ka, shaqaalahooda, booliska Capitol iyo dadka caawinaya” ayuu Trump ku sheegay bayaan uu soo saaray.
Sawiro:-Shirka Dib u heshiisiinta Qaran oo maalintii labaad ka socda M/Muqdisho
DEG DEG:Qarax goordhow laga maqlay gudaha Magaalada muqdisho